Mobil carousel originami "Bird of Paradise" - Moi Mili
Home > Mobil originami carousel "Vorona sy ny paradisa"
Mobil originami carousel "Vorona sy ny paradisa"
Mobil origami "Bird of Paradise"
Mobil origami Moimili "Bird of Paradise" dia ravaka mahafinaritra noho ny vatan'ny zanak'osy. Izy io dia vita amin'ny tanana, teknika origami. Mobil amin'ny cranes taratasy, pompom sy lakolosy marevaka ary Mobra dia mipetaka amin'ny tsatoka miampita. Ny carousel dia ao amin'ny volony ao amin'ny mint, cream ary volo fotsy.
Mobil Moimili dia noforonina tsara amin'ny teknika origami. Mampiasa taratasy matevina maingotra avoaka sy tapa-kazo izahay. Misy vorona amina endrika mahafinaritra maro. Ny merry-go-round dia mety hiasa tsara amin'ny koot-jaza kely, nefa ho tsara ihany koa izany ao an-efitran'ny zaza lehibe na ray aman-dreny. Ny rivotra malefaka dia mametraka ny fihetsiketsehana ary amin'izany dia mampiditra rivo-piainana tokana ao anaty efitrano. 55 halavany cm.
Fitaovana: kitay, taratasy